စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Instagram - သင်သိသင့်သိထိုက်သောအချက်များ▷ owers နောက်လိုက်များ▷➡️
Tik Tok နောက်လိုက်
Instagram ကိုလုပ်ငန်း: သင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 20180မှတ်ချက်များ 820
သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ် Instagram ကိုအပေါ်ရှိပါသလား? သငျသညျအဲဒီမှာသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ သို့တိုင်သင်အဲဒီမှာသင်တို့မျက်မှောက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာအံ့သြ? ယနေ့ကျွန်တော်မြင်ရပါလိမ့်မည် သငျသညျအကွောငျးကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ စီးပွားရေးအဘို့အ Instagram ကို.
ပုံပြင် Instagram ကို
ပထမတစ်ခုကပထမဖြစ်သည်။ “ Snapchat” ကဲ့သို့ Instagram ရုပ်ပုံများသည်လူမှုမီဒီယာလောကတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးကြောင်းအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်အချို့ကိုသုံးနိုင်သည် ဓာတ်ပုံကို applications များ.
Instagram Stories ဆိုသည်မှာပုံမှန်စာမျက်နှာထက်အခြားရင်းမြစ်တစ်ခုသို့တင်ထားသောဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤပုံပြင်များသည် ၂၄ နာရီအကြာတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ သင်ကအကြောင်းအရာထည့်သွင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပျော်စရာကောင်းသော emojis၊ လက်သုတ်ဆေးနှင့်စာသားဖြင့်တည်းဖြတ်ရန်နေရာရှိသည်။ ဒီအစာပါဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက်မဟုတ်ပါ, သို့သော်သင်တင်ပြချက်တွင် Stories မှသတင်းစကားကိုသင်၏အသုံးပြုသူထံသို့ပေးပို့နိုင်လိမ့်မည် သင်၏ပုံမှန်ကျွေးမွေးမှုပေါ်ရှိပုံပြင်အချို့ကိုသင်မျှဝေနိုင်သည်။ အသုံးပြုပါ Instagram ကို Analytics မှ.
အခုတော့မေးခွန်း ဒါဟာစီးပွားရေးအဘို့အ Instagram ကိုသုံးစွဲဖို့မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည် သငျသညျအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးတက်စေရန်ဒီ feature ကိုသုံးပါနိုင်သလား? ကျနော်တို့ဘယ်လိုလေ့လာစူးစမ်း။
Instagram ကိုဇာတ်လမ်းများအွန်လိုင်းကတိကဝတ်သေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ မဆိုပညာသတိရှိသောကြော်ငြာနားလည်ရ၏။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်သင့်အသုံးပြုသူများနောက်ကွယ်မှဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတစ်တစေ့တစောင်းပေးနိုငျသောများ၏အကူအညီဖြင့်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဇာထိုးပုံပြင်များအကြောင်းပြောဆိုနှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကျော်လွန်သငျသညျသူသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှလည်းမရှိ။ သင့်ရဲ့ website မှာမှလာမည့်အပြောင်းအလဲများတစေ့တစောင်းအဘို့ထိုသူတို့ Watch သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများမှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့သူတို့ကိုတင်ပြ။ ဒီနေရာတွင်စိတ်လှုပ်ရှား generate နှင့်သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်အချို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ပုံပြင် Instagram ကိုသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာသီးသန့်တစ်ဦးအချို့သောဒီဂရီချေးငှားရမည်။ ဒီပလက်ဖောင်းတွင်နောက်လိုက်များပိုမိုရရှိရန်အတွက်ဤသီးသန့်၏အားသာချက်ကိုရယူပါ။ ထို့ပြင်လည်းလုပ်နိုင် Instagram ကိုနောက်လိုက်ကိုဝယ် နောက်ထပ်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့။
Instagram ကို algorithm ကို: သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်မိတ်ဆက်မကြာသေးမီက algorithm ကိုအပြောင်းအလဲကုမ္ပဏီများမှ B2C များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ယခင်ကမြေားကိုအဆိုပါစာကျွေးခြင်းအတွက်သက်ကရာဇျစဉျထင်ရှား။ , သို့သော်ပြောင်းလဲမှုအောက်ပါ, အကြိုက်၏ပုံစံအတွက်စောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်ပါဝင်မှုများ၏အမြင့်ဆုံးဒီဂရီကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောစာပမြေား, မှတ်ချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များထိပ်မှာပေါ်လာပါသည်။ ယခု မှစ. Instagram ကိုတစ်ထုတ်ဝေ generate နိုငျသောအတိုးနှုန်းကိုတိုင်းတာဖို့ကြိုးစားပါ။ Artificial Intelligence အကြောင်းပြောဆို !!
သူတို့လိုခငျြသောကွောငျ့ကုမ္ပဏီများ, ကဲ့သို့သော, သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မဟာဗျူဟာများစစ်ဆေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည် Recent Posts ပထမဦးဆုံးပေါ်လာပါသည်။ သူတို့မကျင့်နေလျှင်, ပထမဦးဆုံးမျှဝေဖို့အဘယ်သူမျှမမှတ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာရုတ်တရက်မှတ်သားဒီအပြောင်းအလဲကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အကြောင်းကြားစာကိုဖွင့်ရန်သင့်ပရိသတ်တွေမေးပါ, မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သောအပေါ်သက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများဆွဲဆောင်ကိုနှိပ်ခြင်းအား hashtags ကို shareable နဲ့ content တန်ဖိုးရှိကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခိုင်ခံ့စေဖို့ကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ရဲ့က Shared အကြောင်းအရာ, ကလစ်, ပရိသတ်ကိုတိုးတက်မှုနှင့်ကလစ်၏အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်ညာဘက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး tools တွေကိုရွေးချယ်ဖို့သေချာပါစေ။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘို့သင့် Instagram ကိုများအတွက်လိုအပ်သမျှကိုတိုင်းတာရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကိုပြောပြ Instagram ကို TV က.
1 ပုံပြင် Instagram ကို
2 Instagram ကို algorithm ကို: သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2018
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2018
Instagram ကိုနောက်လိုက် $0.00
Tik Tok နောက်လိုက် $0.00
Facebook နောက်လိုက်များ $0.00
Youtube ကိုစာရင်းသွင်းသူ $0.00
အောက်တိုဘာလ 2, 2019
Copy ကူးခြင်းနှင့်ကူးထည့်ဘို့ Instagram ကိုအက္ခရာများ
ဇန်နဝါရီလ 20, 2019
စိစစ်အတည်ပြုကုဒ်ဝင်မပါဘဲ Instagram ကို
ဇူလိုင်လ 12, 2019
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2019